"Waan nyaadhaatti waa nama nyaatti"
"Waan nyaadhaatti waa nama nyaatti" Featured
Lammiilee balichaan miidhaman baraaruuf sochii cimaan taasifamaa tureera
Dhalli namaa durii eegalee jireenya fooyya’aa jiraachuuf akkasumas fedhii bu’uuraasaa guuttachuuf bakkaa bakkatti socho’aa tureera. Barri adamoofi firii mukaa funaananii jiraachuus taatee bakkaa bakkatti socho’uun kan guutame ta’uu seenaan ni addeessa.
Har’as taanaan godaansi bakka tokkoo bakka biraatti taasifamu kan dhaabbate miti. Haaluma kanaan, godaansi biyyaa biyyatti, baadiyyaa magaalaatti taasifamu daran dabalaa jira. Namootni godaansa biyya ofiirraa gara biyya ambaatti taasifamurratti hirmaatan baay’eensaanii milkaa’ina dhabuun badhaadhina yaadan caalaa rakkoo hamaaf saaxilamaniiru, osoo seeraan ala imalanii galaanarratti lubbuusaanii dhabaniiru.
Barreeffama kootiif bu’uura kan ta’e namoota naannolee garagaraarraa Finfinneetti godaanuun naannawa Qosheetti torban darbe balaa hamaan isaan mudateedha. Namootni kunniin baay’eensaanii baadiyyaa biyyattiirraa sababoota adda addaatiin Finfinneetti kan godaanan ta’uu kanneen lubbuun hafan tokko tokkorraa hubachuun danda’ameera.
Namootni baay’een osoo haala jireenya magaaalattii hinhubatiin waan manaa bahaniif gariin gara kadhaatti, kuun ammoo 'jireenyasaanii' karaarra buufachuuf dirqamaniiru. Jireenyi namootni naannawa Qoshee buufataniis waan kosii kana keessaa funaanamee gurguramurratti kan bu’uurefateedha. Garuu maal godha? Qosheen kaleessa isaan sooraa ture har’a ammoo dabareesaa isaan soorachuuf garaa jabaate.
Qosheen tuullaa kosii baroota dheeraaf walitti qabameedha. Jiraattotni naanawaa Qoshee garri tokko lafa seeraan kennameef irratti mana ijaarratanii kan jiraatan yommuu ta’u, gariin ammoo seeraan ala sharaa diriifatanii kanneen jiraataniidha.
Kosiin kun jireenyasaaniif yaaddoo ta’uun hubatamee warra karaa seeraanis ta’e seeraan ala bakka kana qubatan kaasuuf bara darbe galmeeffamanis hanga ammaatti sababoota garagaraatiin hojiitti hiikuu dhabuun gaaga’ama uumame kana jalaa ummata baraaruun hindanda’amne.
Gama biraatiin ammoo jiruufi jireenyi namoota bakka kana qubatanii irra caalaatti waan kosii kana keessaa argamurratti kan hudaa’e waan ta’eef yaadni, “Achii kaanee maaliin jiraatna? Maal keessa jiraatna?” jedhu ummata biraa ka’aa jira. Kanas ta’u sana lubbuun namoota baay’ee gaaffii kana qabatanii osoo jiranii dabarteetti.
Haa ta’u malee, warra balicharraa hafaniif Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee da’oo (mana jireenyaa) dhaabbataa kennuuf waadaa galeeraa. Kana malees, gargaarsi mootummaa, dhaabbilee mitmootumma, amantiifi namoota dhuunfaa hanga Kibxata darbeetti qarshii miliyoona 76 ga’eera. Gumaachi taasifamu mirgisisaa ittifufuun lammiin lammiif gaaddisa ta'uu kan agarsiisuudha.
Walumaagalatti akkuma mammaaksa, “Waan nyaadhaatti waa nama nyaatti” jedhamu san oduu dharaatiin gowwomfamuun maqaa, “Jireenya fooyya’aa barbaaduutiin” qe'eefi bultoo ofii gad lakkisanii godaanuun yoomiyyuu balaa guddaa waan qabuuf haala qabatamaa jiru hubatanii socho'uun barbaachisaadha.
Gargaarsa namoota baraaramaniif taasifamu finiinsuu cinatti furmaata waaraaf misooma magaalotaafi baadiyyaatti eegalame caalaatti si'eessuun barbaachisaadha. Dhumarrattis, warra balichaan lubbuusaanii marartuu dhabaniif gaddaa, haaluma eegalameen kanneen lubbuun hafanitti abdii horuun gocha fursa argachuu qabuudha.
Torban kana/This_Week 7201
Guyyaa mara/All_Days 1291712